Propyl gallate (PG), inozivikanwawo sepropyl gallate, ine molecular fomula yeC10H12O5. Iyo hama mamorekuru mashoma ndeye 212.21. Sezvo chiChinese "Maitiro eUtsanana Ekushandisa Kwekuwedzera Kwekudya" (GB2760-2011) anoti: Propyl gallate inogona kushandiswa mumafuta echikafu, chikafu chakakangwa, hove dzakaomeswa pro ...
Kuvandudza kwepamusoro-kuchena gallic acid uye mashandisiro ayo mune zvemagetsi kemisitiri
Magetsi makemikari anowanzo kureva makemikari akakosha eiyo indasitiri yemagetsi. Parizvino, pane makumi ezviuru emhando, ari kukumbira zvemhando yepamusoro zvinodiwa, zvakaderera kudyiwa, zvakakwirira zvinodiwa kune hutsanana hwechigadzirwa uye nharaunda yekushandisa uye kukwidziridza ...
Gallic Acid Kugadzirira
Acid Hydrolysis Iyo acid hydrolysis nzira inonyanya kugovaniswa kuita-nhanho nzira uye maviri-nhanho nzira. Iyo huru maitiro kuyerera kwemaviri-nhanho kugadzirira kwegalic acid mbishi zvinhu → inopisa mvura yekuchera → firita zvakasara → t ...
Tannic acid ndiyo yakatarwa tannin, rudzi rwepolyphenol. Iyo isina kusimba acidity (pKa yakatenderedza 6) inokonzerwa nemapoka akawanda e phenol mune chimiro. Iyo kemikari fomula yekutengesa tannic acid inowanzo kupihwa seC76H52O46, inoenderana ne decagalloyl glucose, ...
Gallic Acid Nhoroondo Yemukati uye Mashandisiro
Gallic acid chinhu chakakosha cheiyoni indi inki, yakajairwa yekuEurope kunyora uye kudhira inki kubva muzana ramakore rechi12 kusvika kwana19, ine nhoroondo inosvika kuhushe hweRoma neMipumburu yeGungwa Rakafa. Pliny Mukuru (23-79 AD) anotsanangura kushandiswa kwe gallic acid se ...